Pos System, pos Machine, pos Cash Register, Barcode Printer, fandraisana Printer - Aokia
Data hetra Barcode Scanner
Rosia Paper Roll
Barcode Label taratasy mandraikitena
Nahoana no mifidy aokia
Aokia foana ny vidin-javatra dia tsy mino ny rehetra eo amin'ny raharaham-barotra, dia ny toerana misy fandresena-fandreseny ny fifandraisana eran-tany.
Mamenoa ny vidin-javatra isika amin'ny alalan'ny fanombanana ny tsena, mahay mandanjalanja vidin'ny mahasoa roa. Aokia dia marika malaza sy ny
kalitao no sahy, dingana tsirairay isika hifehy hitsena ny hatsaran'ny fitsipika. Ny mpikambana rehetra ao Aokia mihevitra
mpanjifa tahaka ny olona ao amin'ny fianakaviana, ny mpanjifa ekipa manome anao ny tsara indrindra fanampiana sy vahaolana ho fanontaniana.
58mm Mobile Handheld rosia Printer
Miloko mafana taratasy mandraikitena
Mini Direct mafana Barcode Printer
Milina fampidirana pos vaovao
Toeram-pisakafoanana sy fisotroana mpandraharaha miatrika sarotra sy ny iraka mitsikera andraikitra toy ny fotoana ny fivarotana, fandoavam-bola fanodinana, lisitra fanaraha-maso, andraikitra ara-bola, mpanjifa ampy, asa fitantanana, Mpanj ...
mizara ny nofy amin'ny Aokia
Dia handefa anareo sy tombontsoa vaovao manan-danja ny namany Sary. Aoka ny mifandray. Misaotra anao.